North America (US+CA)[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Amer. Birding Association[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
British Columbia[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Skeena-Queen Charlotte[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
United States[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
US lower 48[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Pacific[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Los Angeles[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
San Clemente Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Marin[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Monterey[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Channel Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Channel Islands National Park[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Santa Barbara[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
San Miguel Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Santa Cruz Island[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
San Francisco[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Farallon Islands[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
San Mateo[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Sonoma[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
San Luis Obispo[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Santa Cruz[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Ventura[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Oregon[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Douglas[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Lane[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Washington[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Grays Harbor[ရှားပါး / မတော်တဆမှု။ ]
Baja California (Norte and Sur)[အစုလိုက်]
Baja California Sur[အစုလိုက်]
Avibase သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး 286,058,347 24 ဇွန်လ 2003 ကတည်းကကြိမ်. © Denis Lepage | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ